July 11, 2021 – Kalfadhi
Ra’iisul wasaare Rooble oo Moqdisho dib ugu soo laabtay kaddib booqashadii Jubbaland
July 11, 2021 Hassan Istiila0 comment
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble oo safar afar cisho ah kusoo maray deegaanno ka tirsan Jubbaland, ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada Muqdishu. Mudane Rooble ayaa booqday magaallooyinka Kismaayo iyo Garbahaarrey ee dowlad-goboleedka Jubbaland. Socdaalka Ra’iisul Wasaare Rooble ee Jubaland ayaa diiradda saarayay arrimaha hirgelinta doorashooyinka, dib u heshiisiinta, xoojinta amniga iyo fulinta mashaariic horumarineed.
Xubnaha guddiga doorashada ee uu soo magacaabay guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi oo doortay guddoomiye
Xubnaha guddiga doorashada kuraasta xildhibaanada gobollada waqooyi ee Somaliland ee uu soo magacaabay guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdullahi oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdishu ayaa iska dhex doortay guddoomiye iyo guddoomiye ku xigeen. Suleyman Caydiid Cismaan, ayaa loo doortay guddoomiye, halka gudoomiye ku xigeen ay u doorteen Cabdishakuur Abiib Hayir. xubnaha guddiga ayaa ka kooban afar qof. Hassan Istiila Mogadishu, Somalia
Baarlamaanka Puntland oo ka dooday wax-ka-bedelka xeerka xafiiska gar-yaqaanka guud
Guddoomiyaha golaha mudane Cabdiirashid Yuusuf Jibriil oo ay weheliyaan guddoomiye ku-xigeenka 1-aad mudane Cabdicasiis Cabdullahi Cismaan iyo guddoomiye ku-xigeenka 2-aad mudane Ismaaciil Maxamed Warsame, ayaa shalay shir-guddoomiyay fadhiga 12-aad ee Kalfadhiga 48-aad ee golaha. Fadhiga waxaa soo xaariday 36 Xildhibaan, waxaana ajandaha fadhigu ahaa ka doodista wax-ka-bedelka xeerka xafiiska garyaqaanka guud oo goluhu ku samaynayey akhriska saddexaad, kadib markii guddiga shuruucda, caddaaaladda, arrimaha diinta iyo dastuurku ku sameeyeen wax-ka-bedel iyo kaabis, iyagoo golaha la wadaagay warbixintooda la xiriirta wax-ka-bedelka xeerka. Xildhibaannada Golaha Wakiillada ayaa qodob-qodob uga doodey, si waafaqsan dastuurka…